कारण तपाईं कहिल्यै गर्नुपर्छ मिति एक कोरियाली मान्छे
पहिले म भेट मेरो प्रेमी आमा, म आफ्नो विचार मनमोहक उनको फोन जवाफ कल र प्रश्न थियो बस भइरहेको उहाँलाई एक असल छोरा । बैठक पछि उनको बन्ने र गर्न तरिका मा जो कोरियाली आमा आशा, म बुझे मेरो प्रेमी अनुपालन संग आफ्नो आमा थिए जोगिन निश्चित मृत्यु भएको छ । मेरो प्रेमी छ एक हुर्केका वर्षीया मानिस बसोबास गर्ने आफ्नै आमा । त्यो केही छ तर मीठो र खुसी-जाने-भाग्यशाली सामान्यतया छ । तर यदि त्यो पनि गर्न व्यस्त लागि परिवार वा यदि उहाँले देख्नासाथ मा एक उच्च-तिर्ने काम, हामी सबै भन्दा राम्रो लागि एक रन बनाउन यो अघि रही. त्यो भने भइरहेको, सबैभन्दा उदार छ महिला र बस को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुक ग्रह मा छ । तपाईं छ भने एक मा आफ्नो जीवन आफैलाई भाग्यशाली विचार. म प्रेम एक राम्रो समय रूपमा धेरै अर्को गला, तर पछि दर्जनौं राउंड्स को पेय र जस्तो देखिने अनन्त बोतलें को छु, म बस बारेमा तयार लागि मेरो गम्भीर छ । तरिका, यद्यपि, म सधैं लागिरहने छ । कोरियाका अब कसरी-गर्न पार्टी । तिनीहरूले छौं मात्र मान्छे मलाई थाहा छ कि तल पकड सक्छ एक पूर्ण-समय काम काम घण्टा एक हप्ता, र अझै पनि पार्टी लगभग हरेक रात यो हप्ता । मात्र गर्न बाटो छ यसको तीखा, गंध सम्पूर्ण घर शीर्षकमाथिको मा फ्रिज. भएको एक कोरियाली प्रेमी भएको अर्थ को एक जार तयार मा साथ दिनु गर्न, कुनै पनि भोजन । जबसम्म तपाईं एक सानो फ्रिज (थिए गम्भीरतासाथ विचार एक खरीद लागि बाहिर) प्राप्त लागि तयार आफ्नो घर को गंध गर्न विशिष्ट हरेक समय तपाईं आफैलाई तय गर्न केहि खान । यो राम्रो कुरा को बारे मा स्वादिष्ट, किण्वित छ भन्ने तथ्यलाई यसको सबैभन्दा शानदार को सबै (पक्ष पकवान) बनाउँछ र पनि सबैभन्दा साधारण खानाको स्वाद -योग्य. खराब हुने छैन सधैं एक खराब कुरा । उहाँले बिल खुट्टा प्रतिशत समय ले र तपाईं किनमेल गर्दा तपाईं गुनासो.
उहाँले संभावना बचत आफ्नो अंक लागि लाभ । लाग्यो बारेमा विभाजन पकवान कर्तव्य हो । उहाँले अन्य विचार छ । जीवन समय मा फिर्ता जान्छ अलि जब उहाँले चाहनुहुन्छ तपाईं गर्न घरेलू देवी को आफ्नो सपना, छैन-यति-चुपचाप सम्झाएर तपाईं कसरी खराब तपाईं साँच्चै उहाँलाई धन्यवाद. यदि आफ्नो कोरियाका के गर्न प्रेम, यसको खान । म नगरेको बताइरहेका कुनै पनि रन-को-को-मिल मासु र आलु-प्रकार रात्रिभोज, या त. हरेक समय हामी तल बस्न, खान, एक सबै-बाहिर भोज. तपाईं तल हेर्न तालिका र यसको भरिएको रातो पत्ती सलाद, र बन्दकोबी, सेतो चामल, मसालेदार पोर्क, मसालेदार लसुन, सानो, सेम अंकुरित, र नुन र मरिच, तिल तेल सस.
घडी रूपमा त्यो भर उनको सलाद, बवासीर मा केही सेतो चामल, मसालेदार पोर्क (पछि यो तेल मा, को पाठ्यक्रम) र एक टुक्रा, रोल्स यो माथि र दृढ यो उनको मुख मा. अब के नै छ । कि छ बस मंगलवार रात खाने । प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ खाने चाडहरूमा लगभग कुनै पनि समय तपाईं प्राप्त देखि सँगै कोरियाली चिसो कटोरे को मा एक हट दिन । आफ्नो कोरियाली प्रेमी प्रेम गर्नुहुन्छ । उहाँले दिन्छिन् बिल, र नरक छ, त्यो पनि लिएका तपाईं पूरा गर्न. पनि, अझै पनि एक कोरियाली मानिस प्राथमिकता र, परिवार सधैं नम्बर एक । उहाँले भने जेठा छोरा, संभावना छन्, त्यहाँ धेरै आफ्नो काँध मा जिम्मेवारी लिन हेरविचार को परिवार व्यापार छ । उहाँले प्रेम, आफ्नो परिवार यति गहिरो छ कि कहिलेकाहीं यो उहाँलाई बाहिर चलिरहेको मा रात को बीचमा गर्न हेरविचार तिनीहरूलाई छ । सम्मान र कदर परिवार धेरै रूपमा उहाँलाई, तपाईं को भाग भएको यो आफैलाई । कसरी निर्भर सावधान उहाँले आफ्नो कोरियन सम्पदाको, संभावना छन्, रूपान्तरण गर्न सम्पूर्ण पूर्वी कुराहरू गरिरहेको को बाटो. पनि त, अधिक र अधिक तपाईं आफैलाई पाउन खाने हरेक भोजन तल्ला मा लुकाइरहेका, पैसा डसना, र चामल खाने मा हरेक भोजन । यदि तपाईं हठी सुझाव एक भोजन कक्ष तालिका र कुर्सियाँ, उहाँले बनाउन तपाईं यति लामो प्रतीक्षा एक प्राप्त गर्न, तपाईं अन्ततः दिन मा सामेल र उहाँलाई मा तल्ला । तपाईं लाग्यो भने हेरिरहेका साबुन थियो बस लागि महिला, त तपाईं छौं मरेका गलत.
कोरियाली मान्छे आफ्नो प्रेम साबुन
मोटा षड्यन्त्र, यो राम्रो छ । बोनस अंक लागि कथावस्तु समावेश कि परिवार नाटक र प्रेम कथाहरू । मलाई लाग्छ कि कवर बस को बारे मा हरेक कोरियाली साबुन ओपेरा बाहिर त्यहाँ. कोरियाली मान्छे को एक सानो हुन सक्छ र नियन्त्रणका, तर हामी देख्न कहाँ आउन सक्छ भनेर (सायद.) सम्झना कसरी आफ्नो आमा एक थियो बताउन तपाईं खान. खान । अब त्यो एक छ तपाईं बताउन गुमाउन एक सानो वजन सुरु गर्दा भरेर बाहिर आफ्नो लुगा । आफ्नो कोरियाली मान्छे हुनेछ संभावना तपाईं दिन को धेरै तपाईं सल्लाह सक्छ सुन्न चाहनुहुन्छ, तर अन्ततः, उहाँले सधैं सही छ. कोरियाका विशेषज्ञ हुन् कुनै, त्यसैले तयार हुन र प्रवेश संग एक मोटी छाला, वा अरू छ । कोरियाई छ सुपर उच्च आशा लागि आफू र तपाईं को लागि छ । तिनीहरूले चाहनुहुन्छ गर्न सफल र चाहनुहुन्छ केही लागि अधिक तपाईं गर्न सफल गरेर आफ्नो पक्ष । भएको एउटा बन्द-दिन छ । उहाँले. गरौं आफ्नो अभिलाषा जान विन्डो बाहिर छौं किनभने भएको केही मूर्ख क्वाटरमा-जीवन संकट । यसको वा स्वीकारे । तपाईं हुनेछ भन्नुभयो यो प्राप्त गर्न सँगै र फिर्ता काम गर्न प्राप्त. निश्चित, कोरियाली पुरुष अग्ले महिलाहरु धेरै रूपमा अर्को मान्छे, तर तिनीहरूले अत्यन्तै वफादार छ । तिनीहरूले शायद पनि सोध्न तपाईं बाहिर टिप्न आफ्नो संगठनों हरेक समय. तिनीहरूले मूल्य आफ्नो केटी राय र कहिल्यै गर्न केहि आफ्नो. मूल्य एक मान्छे हुनेछ जो सधैं घर आउन तपाईं हरेक रात डेटिङ, एक कोरियाली केटा बस. तर थाहा छ कि तपाईं बाहिर हराइरहेको छौं
← भिडियो च्याट भावनाहरु
बारे कुराकानी र भेट्टाउने नयाँ बालिका मेक्सिको मा डेटिङ लागि - डेटिङ भिडियो →